Fantatrao ve ny Vaomiera Fanisana – FJKM Ambavahadimitafo Fantatrao ve ny Vaomiera Fanisana |
Fantatrao ve ny Vaomiera Fanisana
Publié le 23 février 2009 à 12:02
Resadresaka nifanaovana tamin’i RAVELOSON Niriantsoa, mpandrindra sy mpanao sauvegarde ny fiche rehetra :
Inona no ataon’ny Vaomiera fanisana isaky ny alahady eo an-tokontanim-piangonana?
1 . Mizara fiche de renseignements ho an’ny mpiangona ahafahan’ny Fitandremana manao recensement ny vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo.
2. Mizara ny karatra adidy 2008-2011 ho an’ireo mpandray rehetra manatitra ny fiche.
Oviana no niforona ny Vaomiera fanisana ary inona no antony?
Tamin’ny voalohan’ny taona 2007 no niforonany, mba hanomana ny fifdianana diakona 2008-2011.
Mahatratra firy izao ny mpiangona voaisa hatramin’izao?
Ny voaisa (namerina fiche io) dia mpandray 642 ary tsy mpandray kosa dia mahatratra 26
Tokony ho firy ny isan’ny mpiangona raha ny vinavina nataonareo?
Raha ny vinavina dia tokony nahatratra 1 067 ny isan’ny mpandray. Niainga tamin’ny lisitra tranainy anefa izany ka mety efa betsaka koa no tsy eto amin’ny fiangonana intsony noho ny antony maro.
Inona no ampiasana ny « informations » azonareo momba ny mpiangona?
Atolotra ny Mpitandrina sy ny Biraom-piangonana ahafahany mahafantatra ny tsirairay. Eo koa ny mety ilan’ny fiangonana azy araka ny fahasoavana nomen’Andriamanitra ny tsirairay eo amin’ny sehatra samihafa (asa ataony, traikefany, fahalalàny, talenta …)
Misy firy ny mpikambana ao amin’ny Vaomiera fanisana?
11 izahay no amin’ny Vaomiera Fanisana
Ohatran’ny ahoana ny fifandraisana ao amin’ny mpikambana ao @ Vaomiera fanisana?
Miara-miasa mahafinaritra ary araka ny mahamaro ny asa no hifamoriana matetika na tsia. Raha tsy izany moa dia rehefa alahady any am-piangonana no mifanakalo hevitra.
Hatramin’ny rahoviana no miasa ny Vaomiera fanisana?
Rehefa tapitra nameno fiche daholo ny mpiangona tsirairay.
Misy hafatra tiana ampitaina ho an’ny fiangonana ve?
Manentana hatrany ny fandraisana ary ny fanateranareo (ho an’ireo izay efa nandray izany) ny fiche de recensement fa tena ilain’ny fitandremana izany.
Ny eto amin’ny www.fjkm-ambavahadimitafo.info moa dia hiezaka ny handrakitra izany lisitry ny mpiangona izany eto amin’ny tranonkala satria mety hahafahana mivelatra tokoa izany eo amin’ny fifandraisana sy ny fanompoana izay tandrify antsika.